Uluhlu lokuKhangela lweSklinklinks yoLwazi-ukubuza imibuzo eyiyo | Martech Zone
Uluhlu lokuHlola lweeNkcukacha zeSklinks -Ukubuza imibuzo eyiyo
NgoLwesibini, Matshi 15, 2016 UAlicia Navarro
Kude kube kutshanje, abathengisi bedijithali kunye neengcali zearhente yentengiso ezazijonge ukwenza intengiso yeenkqubo zithengile ibhokisi emnyama imeko yedatha. Uninzi azingonjineli okanye izazinzulu zedatha, kwaye kuye kwafuneka bathathe inyani yokholo kwaye bathembele kumabango oboneleli ngeenkcukacha malunga nomgangatho wedatha, bejonga iziphumo emva kokuphunyezwa- nasemva kokuba kuthengiwe.
Kodwa yintoni ekufuneka yenziwe ngabathengisi kunye neearhente kumboneleli wedatha? Banokufumanisa njani ukuba leliphi elona ziko linika esona sisombululo sichanekileyo, neselubala? Nantsi eminye imibuzo oza kuyibuza:
Idibanisa njani idatha?
Ngaba kungokujongwa ngokuthe ngqo kwawo wonke umsebenzisi, okanye ngaba kufunyenwe idatha, apho iindlela zokuziphatha zifunyenwe kwiqela elincinci labasebenzisi zaze zakhutshelwa ngaphandle kumaqela amakhulu? Ukuba idatha yenziwe, ukuchaneka kuxhomekeke kakhulu kubungakanani beqela elilinganisiweyo- ke kubalulekile ukukhangela ubungakanani beqela xa kuvavanywa ababoneleli. Kodwa gcinani engqondweni ukuba nayiphi na ubungakanani, idatha eqikelelweyo ihlala ibandakanya ukwehla kokuchaneka xa kukhutshelwa ngaphandle. Kwaye ungalibali ukuba xa idatha imodareyithwa ngokwamacandelo, uqikelelo luya kusekelwa kuqikelelo kunolwazi lwangempela. Oku kukhula ngamandla kukonyusa umngcipheko wokuba idatha ayinakuyenza.
Ingumbono olungileyo ukubuza imibuzo evakalayo evumela ukuba uvavanye amandla edatha kuyo yonke ifanele, ujonge ngaphaya kweedemografi ezilula ukuze ubenakho ukuthengiselana, ukulandelela imethadatha kunye neminye imiqondiso echaza ngokuchanekileyo injongo yokuthenga. Skimlinks ithatha i-15 yezigidigidi yeenjongo zokuthenga ezisuka kuthungelwano lwe-1.5 yezigidi zabapapashi kunye nabarhwebi abangama-20,000 yonke imihla. Ngokusebenzisa ukufundwa koomatshini kunye nocazululo lohlalutyo kwimveliso yabo yobukrelekrele, iiSkimlinks ziyayiqonda i-taxonomy kunye nemethadatha ye-100 yezigidi zemveliso kunye nokunxibelelana. Basebenzisa olu lwazi ukwakha iziqendu zabaphulaphuli eziguqula kakhulu ngokusekwe kwiimveliso kunye nabasebenzisi beempawu ezinokuthi zithengwe, ezivumela ukuboniswa okusebenzayo ngakumbi, intlalontle kunye nemikhankaso yevidiyo.
Luhlobo luni lwedatha oluqokelelweyo?
Okulandelayo kuluhlu kukufumanisa ukuba luhlobo luni lwedatha oluhlanganisiweyo. Izigaba zinokubandakanya ukucofa, amakhonkco, imethadatha, umxholo wephepha, amagama ophando, iimveliso kunye neemveliso, ulwazi lwamaxabiso, ukwenzeka kwentengiselwano, umhla kunye nexesha. Iindidi ezingaphezulu zedatha zihlanganisiwe, ngakumbi iimodeli ezibonakalayo zokwenza izinto kuya kufuneka zisebenze nazo, ezinokuphucula kakhulu ukuchaneka. Ukuba ziindidi ezimbalwa zedatha eqokelelweyo- umzekelo, ukubonakala nje okanye ukucofa-kuyakubakho ulwazi olunqunyelweyo olunokusetyenziselwa ukujonga uqikelelo okanye ukuphucula iiprofayili zomsebenzisi. Kule meko, umngcipheko kukuba iiprofayili zomsebenzisi ezilula kakhulu nezingalunganga ziya kwenziwa.
I-Skimlinks iqokelela kwaye ihlalutye idatha kwaye ichonge iipateni kubapapashi abaninzi nakubarhwebi ukuqikelela ngokuchanekileyo isimilo sokuthenga. Umzekelo, indibaniselwano yomsebenzisi omnye otyelele amaphepha ali-10 kwiiwebhusayithi ezintlanu ezahlukeneyo zinokuchongwa njengepateni ebonisa umdla wokuthenga kwiveki ezayo. Akukho namnye umshicileli onokuvelisa idatha Skimlinks Ukufikelela kuthungelwano lwayo lwe-1.5 yezigidi, kodwa ulwazi lomshicileli yinxalenye enye yedatha yesiginali. I-Skimlinks ikwahlalutya idatha efunyenwe kubathengisi abangama-20,000 kwinethiwekhi, kubandakanya ulwazi ngamaxabiso, ixabiso loku-odola kunye nembali yokuthenga.
Ngokwenza njalo, Skimlinks Idibanisa imiqondiso evela kwindalo yonke ethengisa.
Iqinisekiswa njani idatha?
Olunye ulwazi olubalulekileyo lokujonga xa kuvavanywa ababoneleli beenkcukacha sisakhono sokuqinisekisa uqikelelo ekusebenzeni. Umzekelo, nawuphi na umboneleli obanga ukuba amacandelo abo aya kuqhuba uguquko kufuneka afake idatha yokuthengiselana ukuqinisekisa ukuba ukuthengwa kuyenzeka. Ngaphandle kwedatha yokuthengiselana, akunakwenzeka ukuqinisekisa isindululo sexabiso.
I-Skimlinks inenkqubo yokujolisa kubaphulaphuli enceda abathengisi ukuba bajolise kubasebenzisi ngokwendawo abakuyo kumjikelo wokuthenga. Uqikelelo lwenziwa kusetyenziswa idatha yemeko, imveliso kunye namaxabiso, kwaye ziyaqinisekiswa kusetyenziswa ulwazi lwentengiselwano. Abasebenzisi bayalandelelwa ukujonga ukuba bakwenzile ukuthengwa okulindelweyo, kwaye inkqubo yokufunda yomatshini eyenza amacandelo iyaqhubeka ngokuqeqeshwa ngokusekwe kolu lwazi. Oko kunceda abathengi ukuba baphephe imeko apho bajolise khona kubathengi abanokuthi baphande ngemveliso abangakwaziyo ukufikelela kuyo okanye abangenanjongo yokwenyani yokuthenga. Isiphumo kukusebenza okungcono kwecandelo.
Abathengisi bedijithali kunye neearhente ezibandakanya intengiso yenkqubo kufuneka bakhethe umboneleli wedatha ofanelekileyo wokunyusa iindleko zabo ngewaka lamagama (CPM) okanye indleko ngesenzo ngasinye (CPA) amaxabiso. Izinga lokukhula kwenkqubo yentengiso kunye necandelo lokuthengisa eliqhutywa yidatha linokwenza kube nzima ukwazi ukuba ukhethe njani umboneleli wedatha ofanelekileyo. Kodwa ngokusebenzisa le mibuzo mithathu yokuqonda xa kuvavanywa ixabiso lesibonelelo somnikezeli wedatha, abathengisi bedijithali kunye neearhente banokuvula ibhokisi emnyama kwaye bafumane umxube wedatha ofanelekileyo.
tags: Cofa idathaindleko ngesenzo ngasinyeIindleko ngomboniso ngamnyecpacpmIinkcukachaumboneleli wedathamgangatho wedathaUkuqinisekiswa kwedathaidatha yemetaImethadathaInkqubo yentengisoAbaphulaphuli benkquboizikriniidatha yentengiselwano
Alicia Navarro Tuesday, March 15, 2016
UAlicia Navarro ngu-CEO kunye noMsunguli we-Co Skimlinks, iqonga lokwenza imali lomxholo elinceda iiwebhusayithi ukuba zivuzwe ngeenjongo zokuthenga ezenziwe kumxholo wazo. Phambi kokumiliselwa kweSkimlinks, usebenze ngaphezulu kweminyaka eli-10 eyila kwaye esungula usetyenziso olusekwe kwi-Intanethi nakwi-Intanethi e-Australia nase-UK. Ukusukela ngo-2007, uAlicia uyikhulisile inkampani ukuba ibe ngaphezulu kwabasebenzi abangama-85 kwiiofisi eziseLondon, eSan Francisco naseNew York City.
Ngokwenyani, Ngokwenyani, Ndifuna ukusebenzisa iqonga lakho… Kodwa…
Sifumaneka ngoku kwiApple News!